Shir Ay Kasoo Qaybgalayaan 2kun Oo Qof Oo Degmada Gunagado Kadhacaya - Cakaara News
Shir Ay Kasoo Qaybgalayaan 2kun Oo Qof Oo Degmada Gunagado Kadhacaya
Jigjiga(cakaaranews)Sabti 26ka November 2016. Shir balaadhan oo kadhacaya degmada gunagada 2da todobaad ee fooda inagu soo haysa gudahood ayaa waxaa kasoo qaybgalaya 2kun oo qof oo isugu jira mas’uuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI, Odayaasha Deegaanka, Qurbajoogta Gobolka Jarareed, Waxgaradka, aqoonyahanka, culimo-awdiinka, haweenka iyo dhalinyarada islamarkaana kakalasocda degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka jarar.
Hadaba, ujeedooyinka shirkan ayaa waxaa kamid ah sidii xadhiga looga jari lahaa mashruuca biyo galinta dheer ee Birqod-Gunagada ilaa Danood-Gaashaamo iyadoo mashruucan oo isugu jira sadex waji oo waawayn uu 100% dhamaaday wajigiisii koobaad. Kaasoo ah birqod ilaa gunagado islamarkaana ahaa wajigii ugu muhiimsanaa ee mashruucan kanadhigan in hadii lagu guulaystay hirgalinta wajigan koobaad ay aad udhib yartahay hirgalinta wajiga 2aad, 3aad ilaa wajiga 4aad maadaama oo marka ay biyuhu gaadhaan gunagado ay ilaa iyo danood qulqulka biyuhu kusoconayaan kalasaraynta dhulka, iyadoo dhamaystirka wajigan 1,aad ee birqod ilaa iyo gunagado ay mashruucan baaxadiisu dhan tahay 40km oo waraabinaya tuulooyinka udhexeeya 2da degmo, meesha 5tii KM ee kasta loo sameeyay goob-biyood ay dadka iyo xooluhuba kacabi karaan.
Sidoo kale, waxaa xadhiga lagajari doonaa mashruuca kale ee laga hirgaliyay degmada gunagada kaasoo lagu macaaneeyay ceelkii dhanaha noqday ee gunagado laga qoday. Taasoo ah taariikhda abid markii ugu horaysay ee mashruuc noocan ah laga hirgaliyo guud ahaanba dalkeena itoobiya. Waxaa intaa dheer mashruuca dhismaha guryaynta(qodobaha) oo iyana ladhagax dhigi doono.
Ujeedada 2,aad ee kulan-waynahan ayaa noqonaysa in lagu soo bandhigo shirka waxyeeladii ay UBBO ugaysatay shacabka reer jarareed iyadoo labooqan doono xabaalo-wadareedka ay ku-aasan yihiin 120 qof oo reer jarareed ah oo ay hal maalin ah gudihii UBBO kuxasuuqday Degmadaasi, iyadoo ay goobtaas kahadli doonaan odayaasha, culimo-awdiinka, aqoonyahanka, eheladii iyo qaraabadii ay dishay gacanta kaxaq daran ee UBBO.
Sidoo kale waxaa shirkan lagu soo bandhigi doonaa dadkii reer jarareed ee ay laxaadkooda UBBO kanaafaysay, agoontii reer jarareed ee waalidkood UBBO laysay, gabdhihii ay kufsadeen iyo dhamaan waxyeeladii ay UBBO ugaysatay shacabka reer jarareed oo dhan sida xasuuqii cobale iwm. Waxaana kahadli doona qaar kamid ah xubnihii UBBO ee xasuuqa gaystay islamarkaana udhashay gobolka jarar.
Waxaan iyana meesha kamadhnayn in la isbarbardhigi doono waxqabadka iyo horumarka kajira guud ahaan gobolka iyo gaar ahaan degmada gunagado oo kamid ah meelaha ay xasuuqa ba’an kagaysatay UBBO.
Dhanka kale waxaa lasoo bandhigi doonaa waxyeeladii iyo kufsigii ay itixaadku ugaysteen shacabka reer jarareed.
Iskusoo wadaduuboo, xadhig-kajarka mashruucan biyo-galinta ayaa kusoo hagaagay xili uu roobkii dayrtu daahay oo ay roob yaraani kajirto deegaanka islamarkaana bulshada deegaanku ay kujiraan roob-doon iyo alla bari isagoo lafilayo inuu wax badan katari doono xaalada isbadalka cimilada Elino ee roob yaraanta keenta.